Small Utrish - endaweni ekhetheke kakhulu ogwini Black Sea, okuyinto ethandwa kakhulu phakathi abahambi. Phela, lapha uzothola adventure real. Ulwandle efudumele, izintaba zakhona ezinhle namahlathi relict ukudala landscape eliyingqayizivele futhi omuhle kakhulu imisebenzi yokuzilibazisa. Ngakho lapho le ndawo emangalisayo?
Utrish Small emzaneni: incazelo emfushane endaweni
Lokhu umuzana wokudoba esisogwini ogwini loLwandle Black futhi iyingxenye Arboretum kaZwelonke kanye zasolwandle reserve Utrish. Ibanga kuya Anapa ingamakhilomitha angu-20 kuphela, futhi Novorossiysk - 30.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukufinyelela emzaneni esekusithekeni akulula: kungenziwa noma ngemikhumbi noma akulula kakhulu ukungcola komgwaqo. Noma kunjalo, bonke abanye bavela e kuwufanele umzamo nangobunzima. Ngemva izihlahla relict ekuhlanzeni umoya ohlanzekile, fresh, nezintaba ukuvikela endaweni emimoyeni ebandayo. By the way, isizini izivakashi Uthatha May kuya ku-October. Ngalesi sikhathi izinga lokushisa lize liba ngaphansi kwe-degree angu-20.
Edolobhaneni kukhona base ezincane ezimbili kuphela izivakashi. Ngaphezu kwalokho, abahambi ungathola yokuhlala engxenyeni ezimele. Kukhona kuso idolobha lamatende.
Nezokungcebeleka isikhungo "Utrish Encane"
Amancane resort isikhungo itholakala amamitha 100 nje esuka olwandle. Lapha uzothola Cottages olunothile kanye Cottages ethokomele lokhuni ahlakazekile ehlathini, lapho uhlinzeke embhedeni ehloniphekile futhi ajabulisayo.
"Utrish Small" - kwelinye lamakamu ezimbili izivakashi endaweni yaleli yogu. Incwadi kusengaphambili ngakho kuyakufanelekela. Yiqiniso, spa isikhungo has zonke Izinsiza ezidingekayo kwezivakashi. Ngokwesibonelo, izivakashi basekela yokupaka khulula. Futhi sisondelene kakhulu ebhishi kukhona isitolo lapho ungathenga igilosa futhi ezinye izinto kuyizidingo eziyisisekelo.
Isithombe "Utrish Small" kuyabonakala ukuthi ngempela base kuyinto engxenyeni enhle esithekile ogwini. Noma kunjalo, kukhona inombolo kunalokho umxhwele amakamelo. izindlu ezakhiwe ngokhuni kanye Cottages zihlukaniswe amakamelo spaciousness ezahlukene. Uma uya e-inkampani enkulu, ungakwazi ukuqasha ngisho umzimba wonke.
Yini elindele wena egumbini? Ngokwemvelo, sinalo lemali edingekile of ifenisha, kuhlanganise ezithambile imibhede, wardrobes, amatafula, izihlalo amatafula. cottage ngamunye nendlu yangasese, kanye nekamelo lokugezela. Ezinye amakamelo air conditioning ne amafriji. Futhi sokuqasha, ungakwazi ukuqasha i yokucela kagesi noma multivarku.
Guest house "Small Utrish" ukuhlinzeka izakhamuzi zalo ne degree ezidingekayo wenduduzo. Kukhona yokuhlanza njalo, elinemishwe ekushintsheni kanye amathawula, ngakho isimo amakamelo ngeke akhononde.
Yiqiniso, izivakashi nakho nesithakazelo umbuzo yini isikimu amandla inikeza nemisebenzi ehlukahlukeneko "Utrish Small". Database inikeza izivakashi zalo nge ukudla amathathu agcwele ngosuku. Amathebula for befuna wakhonza igumbi lokudlela elikhulu. Kodwa ngemuva kuyajabulisa ukukhokha extra ngokwehlukile. Ngaphezu kwalokho, kukhona bar, okuyinto uthengisa ukudla ngomumo eyenziwe kule eziyinkimbinkimbi resort. Kukhona ekhishini ohlanganyelwe lapho wonke umuntu kungaba ukupheka bona. Futhi indawo ehlobo, kukhona ukosa inyama zabahamba ngubani ukhetha asanda okuphekwe ukudla oku umlilo.
Ibhishi namanzi ezemidlalo
Njengoba kushiwo ngenhla, isikhungo lokuzijabulisa amamitha 100 nje esuka ebhishi - ungakwazi ukufinyelela kuso ngomzuzu owodwa. amabhishi Secluded itshana kuthokozise yisiphi isihambi. Phela, asikaze sibe khona kwatheleka amakhulu wabantu. Uzokwazi ukuba ujabulele ukuchayeka esiphezulu elangeni emanzini afudumele yoLwandle Olumnyama.
By endleleni, lapha izivakashi uphiwa ezihlukahlukene imisebenzi kwezokuzijabulisa. Ikakhulukazi, ungakwazi ukugibela ngesikebhe noma isikebhe, noma ngisho scuba diving. Kafushane, nesithukuthezi nje abanalo.
Yokuzijabulisa futhi ngisebenza izinsuku holidaymakers
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ukuzilibazisa unikeza anhlobonhlobo kokuzijabulisa namasevisi. Yiqiniso, akukho ezinomsindo yokuzijabulisa, izimakethe kanye kuma-nightclub. Kodwa abathandi imisebenzi yangaphandle bayojabula ukuchitha iholide, njengoba le ndawo igcwele ezihlukahlukene ezikhangayo.
Ikakhulukazi, ezihlukahlukene izinkambo ahlinzekwa njalo futhi izintaba, oyoletha eziningi ukuzijabulisa abahambi. Eduze kukhona umthombo elincane lamanzi esiphethu. Ngesinye isikhathi lapho bebehlela ukudala indawo ngisho yamba emthonjeni ojulile. Yize le ndawo yahlala beqinile, zama amanzi ephulukisa futhi wonke umuntu can.
Nasezintabeni kukhona echibini elincane ngamanzi ecacile. Awukwazi kuphela ukubhukuda, kodwa futhi ukuba sikujabulele panorama okukhazimulayo esivula kusuka phezulu. Lena indawo abathandi umlando nemivubukulo, eduze kwalapho kumila khona Amanxiwa omuzi wasendulo.
Ngaphezu kwalokho, njalo ahlelwe kusukela esigodini resort uhambo kule mboni endawo ekhanya iwayini ngaphansi kwegama "Abrau-Durso". Lapha izivakashi nethuba avakashele igumbi yokunambitha futhi ujabulele ukunambitheka esiphundu iziphuzo esihle.
Futhi abantwana uqobo lwabo bazokujabulela uhambo edolobheni eliseduze Big Utrish, lapho kukhona izindawo eziningi ezithakazelisayo, kuhlanganise Dolphinarium.
Njengoba ukuzijabulisa ngasesinqeni, emthunzini kwezihlahla kukhona useyili for okuphumuzayo, kanye senhliziyo futhi amaslayidi izingane. Kukhona zokudlala, lapho izakhamuzi ukuhlela njalo umncintiswano ukudlala phakathi kwabo.
Izibuyekezo mayelana ukuphumula ngasesinqeni
Uma uthanda iholidi okuthulile, lo "Utrish Small" - iyona choice ephelele. Yiqiniso, ukuhamba ensimini ka base has kokubili pluses kanye minuses. Ungalindeli ukuthi uzobe indawo suite zikanokusho ne air conditioning, njengoba izimo nesizotha more lapha eziphilayo. Ngakolunye uhlangothi, ngeke ukuphazamisa ababethi bemitshingo nesixuku ngaphandle kwefasitela noma ujamu ogwini. Uzokwazi ukuze bajabulele ubuhle esingenakuqhathaniswa bemvelo lapho kunokuthula nokuzola. Futhi ogwini kukhona njalo endaweni esekusithekeni. Izivakashi eziningi ukushiya izibuyekezo omuhle ngesisekelo salokhu. Ngempela, naphezu remoteness kusukela impucuko, inkonzo enkulu futhi iholide fun okuqinisekisiwe.